Adobe Acquires Magento Platform Commerce Online | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u muuqanaa inaan wadaagno waxyaabo kala duwan liisaska liiska, badhannada iyo cagaha si aad boggaagu u gaadho heerarka maanta. Iskusoo wada duuboo, waxay ku anfacayaan kuwa eCommerce ama goobaha e-commerce ee badanaa lagu maareeyo meheradaha sida Magento, Prestashop ama Woocommerce. Hagaag, waa tii ugu horeysay hadda waxaa lagu iibsaday Adobe 1.680 bilyan ee dollar.
Adobe, oo aan haysanno ku xiran naqshadeynta iyo barnaamijyada tafatirka, Waxay ka dhigeysaa boodboodka suuq dijitaal ah oo koraya: ganacsiga elektarooniga ah. Waxaan ku fahmi karnaa waxa jidkayaga ku soo socda oo leh dhammaan eCommerce kuwaas oo ka dhigaya dhammaan noocyada maqaallada in ay heli karaan dad badan taasna ay ugu wacan tahay sahlanaanta kaararka sida saddexdaas la soo sheegay, way fududahay in la iibiyo.
Magento waa barxad bixisa tas-hiilaadka samee bakhaar ama eCommerce saacado gudahood adigoon u marin horumarka. Magento wuxuu la tartamaa labada kale sida Prestashop ama Woocommerce, mid walbana wuxuu ku kala duwan yahay iyo heerarkiisa qaabeynta; ama nooca eCommerce ee aan raadineyno.
Magento maanta ayaa qaadata $ 155.000 bilyan oo ganacsi waana taas sababta uu ku helay Adobe. Fikradda Adobe ayaa ah in lagu soo bandhigo Magento qaybta loo yaqaan 'Adobe Experience Cloud Suite' si loo dhigo qalabkaaga adeegga ee la xiriira iibka khadka tooska ah sida suuqgeynta, xayeysiinta, maaraynta nidaamka iyo waxyaabo kale oo badan.
Talaabadan uu qaaday Adobe ayaa mida kale dhiiri galin doonta laba madal ayaa kor u kacaya Oo yaan lala yaabin haddii mid kale oo waaweyni mid helay. ECommerce ama ganacsiga internetka waxay leeyihiin mustaqbal weyn waxayna umuuqataa inaysan jirin wax kale oo bilaabay inay qaadaan talaabooyinkooda ugu horeeya, in kastoo aan leenahay Amazon oo ah shirkad weyn oo wax walba qaadata. Xaalad gaar ah oo ah tan Adobe markii aan la qabsanay qalabkaaga softiweerka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe wuxuu Magento ku helayaa $ 1.680 bilyan
Keenista qolal nolol leh sawirro lagu xardhay derbiga laftiisa